Thursday May 16, 2019 - 23:02:56 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo maanta gobolka Gedo ku dhaxmaray ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin iyo maleeshiyaad gacan saar laleh Xabashida Itoobiya.
waa sawirka Salaad Cagalaab Taliyihii ciidamada sirdoonka Garbahaarey
Dagaalka oo maanta duhurkii ka dhacay duleedka degmada Garbahaarey ee xarunta gobolka Gedo ayaa yimid kadib markii ay maleeshiyaadka maamulka isku magacaabay Jubbalanad isku dayeen in ay jidgooyo udhigtaan gaadiidka dadweynaha.
Weerar jidgal ah oo ay ciidamada Al Shabaab u dhigeen maleeshiyaadka ayaa isku bedelay dagaal muddo saacada ah qaatay, ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in dhimashada ciidamada Maamulka Axmed ay gaartay 7 askari waxaana kamid ah sarkaal sare.
Col. Salaad Caga laab oo ahaa taliyihii ciidamada sirdoonka degmada Garbahaarey ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay dagaalkii maanta ka dhacay gobolka Gedo, wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamo Itoobiyaan ah oo gurmad usameeyay maleeshiyaadka laweeraray ay dib ugu laabteen saldhigga ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha Garbahaarey.
Siyaad Caga laab ayaa caan ku ahaa wada shaqeynta uu laleeyahay saraakiisha Xabashida Itoobiya wuxuuna kamid ahaa saraakiishii ciidamada Itoobiya usoo gelbiyay dhanka gobolka Gedo.